Ikea ifenisha hacks nge-rack noma nge-cannage | Bezzia
Ikea ifenisha hacks nge-rack noma nge-cannage
UMaria vazquez | 10/09/2021 18:00 | Zenzele
Amagama esiNgisini ayanda ngokwengeziwe kumagama ethu nsuku zonke. Futhi noma singazi ukuthi singahumusha kanjani eziningi zazo, siyakwazi ukuzihlanganisa nomsebenzi othile. Kwenzeka negama elithi ukugembula, elihlotshaniswa nabaningi ngezinguquko nezinguquko ezijwayele ukwenziwa ngabantu abakha ifenisha yesigebenga saseSweden.
Namuhla kunemibono eminingi enetheni yokuguqula ifenisha ye-Ikea. Amaningi ala ma-hacks wefenisha ye-Ikea asuselwa enkambisweni ethile yokuhlobisa efana ne-cannage kuleli cala. Futhi yilokho ifenisha ene-grick ye-wicker noma i-cannageZibe semfashinini eminyakeni emine edlule futhi azikaphelelwa amandla azo.
1 Umkhuba we-cannage
2 Ikea ifenisha hacks nge-cannage
2.1 Ivar ikhabethe
2.2 IBilly / Oxberg Bookstore
Kuzofanele sibuyele emuva ku-2017 ukuze sikhumbule ukuqhuma kwefenisha ye-cannage. Ngemuva kwalokho, umhlaba wokuhlobisa, kepha hhayi umhlaba wokuhlobisa kuphela, waphinde wayengwa yimvelo, ubuciko ... nezinkampani zokwakha azizange zinqikaze ukufaka lolu hlobo lwefenisha emaqoqweni abo.
I-cannage, njengoba lokhu kuvame ukubizwa kanjalo inqubo yokwaluka, kukhuthaze inqwaba yabaqambi ukudala amaqoqo wefenisha ahlukile eminyakeni yamuva. Futhi asimangali ngoba le gridi ye-rattan inikeza ubuntu obuhlukile nemfudumalo kwifenisha.
Ama-gratt Rattan noma ama-wicker Baphinde babamba ukunakwa kwezibalo ezahlukahlukene ze-DIY. Futhi intengo ifenisha ye-cannage evame ukufika ifinyelela kuyabonakala, abaningi babone kulolu hlobo lweprojekthi ukuphela kwendlela yokuyifaka ekhaya labo. Futhi ukuthi ukusebenza nge-cannage nokwenza ngezifiso ngale nto kanye nefenisha nezesekeli zasekhaya kusuka ekuqaleni, kulula, njengoba uzoba nesikhathi sokuqinisekisa.
Ikea ifenisha hacks nge-cannage
Kunezinqwaba zefenisha ye-Ikea ene-cannage. Njengenjwayelo, sikhethe izintandokazi zethu. Sikwenzile kubhekwa intengo yoqobo yefenisha ye-Ikea ukuze zifinyeleleke nobunzima bephrojekthi.
Sebenza nge-cannageNjengoba sishilo, akuyona inkimbinkimbi, kepha kufanele ubhekele izinto eziningana lapho uyenza. Ngokuya ngobulukhuni bento ebhalwe ngayo nendlela eyethulwe ngayo, kungathakazelisa ukuyifaka emanzini afudumele ukuze kube lula ukuyelula noma ukuyilingisa, njengoba ufuna ukuyibiza kanjalo. Ngaphezu kwalokho, kuzobaluleke kakhulu ukukhetha ukunamathela okulungile engqondweni - uma uzosebenzisa okunamathelayo - uhlale ukhumbula njalo igridi kanye nendawo ofuna ukunamathela kuyo.
Uhlelo lwesitoreji se-IVAR Kuyasebenza kakhulu ukuthi ibiphendula izidingo ezahlukahlukene zamakhasimende e-Ikea iminyaka engama-50. Izinkuni eziqinile ezingalashwa, impahla yemvelo ehlala isikhathi eside futhi emelana kakhulu ongayinakekela ngokusebenzisa uwoyela noma i-wax, ikhabethe le-Ivar lingenye yezinto ezithandwa kakhulu kulolu chungechunge. Ukulinganisa i-80x30x83 cm, inamashalofu amabili ongahambisa ukuvumelanisa isikhala nezidingo zakho. Futhi kubiza kuphela i- € 59.
Ukwenza ngokwezifiso leli khabethe nge-cannage kulula kakhulu njengoba kusikhombisa Septhemba Hlela esifundweni sakho. Nguyena ositholele amathuba ale nhlanganisela futhi owenze ngendlela elula, ukunamathisela igridi ngqo eminyango yale fenisha nokungeza ezinye izibambo. Kepha akukhona ukuphela kwento engenzeka uma kukhulunywa ngokuguqula le khabethe njengoba ubona esithombeni esingenhla; Ungakwazi futhi ukusika iminyango bese ushintsha ingxenye yezinkuni nge-cannage, ngaleyo ndlela kukwenze uzizwe okuphakathi kwekhabethe.
IBilly / Oxberg Bookstore
U-Ikea usho lokho njalo ngemizuzwana emi-5 isitolo sezincwadi sikaBilly siyathengiswa ndawondawo emhlabeni. Iqiniso elihlaba umxhwele uma ucabanga, ngaphezu kwalokho, ukuthi ishelufu lezincwadi likaBilly belikade likhona kukhathalogi yale nkampani kusukela ngo-1979. Namuhla isalokhu iyindlela ekhethwa abafundi, kodwa hhayi abafundi kuphela.
Iyunithi lokuchelela likaBilly / Oxberg elineminyango yengilazi kuyisinqumo esihle sokwandisa indawo yokugcina emakhaya ethu. Ukulinganisa i-80x30x202 cm, inamashalofu angaguquguqukayo namandla amakhulu. Inamathisela amagreyidi eminyango yengilazi Kuzoba lula futhi, njengoba ubona kwividiyo yeLone Fox.Ividiyo enegciwane phakathi kwalabo abazinikezele kuma-hacks e-Ikea.
Vele ngaphandle kokudlala ngemininingwane kugridi ongakwazi dlala ngombala ukufeza imiphumela ethe xaxa noma ehambisanayo ngomhlobiso wekhaya lakho. Ushintsho olulula kuzimele zefenisha, luyiguqula ngokuphelele. Uye wawathanda lawa mafenisha we-Ikea? Thola laba abanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Zenzele » Ikea ifenisha hacks nge-rack noma nge-cannage